John Louis Groves | | ယေဘုယျ
အကယ်၍ သင်သည်ပရိုဂရမ်းမင်းကိုနှစ်သက်သူဖြစ်ပါကတစ်ကြိမ်ထက်မကပိုမိုသေချာသည် သင်သည်ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကားများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းရင်ဆိုင်ခဲ့ကြပါလိမ့်မယ်။ ဤအချက်သည်သင်က၎င်းကိုကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်နိုင်လိမ့်မည်၊ ပို၍ ကောင်းကောင်းပြောနိုင်သည်မှာသင်သည်အခြားဘာသာစကားများနှင့်စတင်အလုပ်လုပ်သောအခါမည်သည့်အချိန်၌ပင်သင်ပျော်မွေ့နိုင်မည်ကိုစိုးရိမ်ခြင်းမရှိသောအဆင့်သို့ရောက်သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုတ ဦး တည်းတင်ဆက်အထူးသဖြင့်။
သင့်ဘဝ၏ပိုမိုအဆင့်မြင့်သောအဆင့်တွင်၊ သင်သည်သင်၏ ၀ ါသနာကိုအသေးငယ်ဆုံးသောအိမ်နှင့်မျှဝေလိုသောအချိန်ရောက်လာပြီဖြစ်လိမ့်မည်၊ တိကျမှန်ကန်စွာပရိုဂရမ်ရေးရန်သင်ယူခြင်းသည်သင်ရရှိနိုင်သောအသိပညာမဟုတ်သောကြောင့်အမှန်ပင်ခက်ခဲနိုင်သည်။ လများသို့မဟုတ်နှစ်များတွင်သင်သည်နှစ် ဦး စလုံးအားပညာသင်ကြားခြင်းနှင့်အခြား developer များမှထုတ်လုပ်သော source code ကိုပင်ကြည့်ရှုခြင်းဖြစ်သည်။ ဤအချက်နှင့်ဘာသာစကားတစ်ခုစီတင်ပြသောအထူးသဖြင့် \_ t ငါတို့အိမ်ရှိကလေးငယ်များအတွက်မည်သည့်အရာသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သနည်း။
အမှန်တရားကတော့ကျွန်တော်တို့ပြသခဲ့တာကပရိုဂရမ်းမင်းကဲ့သို့ရိုးရှင်းသည့်အရာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်မှာအလွန်သေးငယ်သောအရာများဖြစ်သည်။ ကံမကောင်းစွာပဲငါတို့ဖြစ်နိုင်ချေတွေကိုစပြီးလေ့လာတဲ့အခါမှာများတယ်၊ ဒါကြောင့် HWLibre မှာငါတို့စုရုံးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ် နည်းနည်းလမ်းညွှန်, ငါတို့အကြောင်းကိုပြောလိမ့်မယ်ဘယ်မှာ, အသက်အရွယ်အားဖြင့်ပို။ ပင်နည်း ကျနော့်အမြင်မှာတော့ပိုပြီးမှတ်သားဖွယ်ကောင်းပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဘာသာစကားတွေပါ.
1 အသက် ၃ နှစ်မှ ၆ နှစ်ကြား
1.1 ခြစ်ရာ Jr
2 အသက် ၃ နှစ်မှ ၆ နှစ်ကြား
3 အသက် ၁၀ နှစ်မှ ၁၂ နှစ်အကြားရှိ
3.1 Code ကိုမျောက်
4 အသက် ၁၀ နှစ်မှ ၁၂ နှစ်အကြားရှိ
4.1 AppInventor ပါ
4.2 Python ကို
5 ၁၇ နှစ်နှင့်အထက်
အသက် ၃ နှစ်မှ ၆ နှစ်ကြား
ဤပထမအဆင့်တွင်အမှန်တရားမှာကလေးများထင်ရနိုင်သည် အချို့ခြေလှမ်းတစ်ခုမှာဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာကိုစတင်နားမလည်နိုင်သေးပါ။ ဒါကြောင့်သူတို့ဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာမသိဘဲသူတို့ကိုလေ့လာသင်ယူဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ ဒီအချိန်မှာဒီဟာကမလိုအပ်ဘူး၊ ဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုကသူတို့ကိုကစားခြင်းအားဖြင့်သင်ယူအောင်ကြိုးစားဖို့ဖြစ်တယ်။
သူတို့ကိုကွန်ပျူတာအတွေးအခေါ်များကိုစတင်ရန်အကောင်းဆုံးအရာဖြစ်သည် သူတို့ကြိုက်နှစ်သက်သည့်အရုပ်အမျိုးအစားအချို့ကိုဝယ်ယူပြီးသူတို့၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်ပါ ပြီးတော့ဒီသဘောနဲ့ကြည့်ရင်မင်းစဉ်းစားလို့မရနိုင်တဲ့အချက်ကဈေးကွက်ထဲမှာငါတို့မှာရရှိနိုင်တဲ့ရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤကမ္ဘာပေါ်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးငယ်များကိုအစပြုရန်ပထမ ဦး ဆုံးကြိုးပမ်းမှုတွင်ငွေအလွန်အကျွံမသုံးစွဲလိုပါကရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာလောင်းကြေးဖြစ်သည်။ ခြစ်ရာ Jr။ Android နှင့် iOS နှစ်ခုလုံးအတွက်အသုံးပြုနိုင်သော application တစ်ခုကို block programming အတွက်အသုံးပြုသည်။
ဒီလျှောက်လွှာ၏အနှုတ်လက္ခဏာကို၎င်းကိုစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည့်ဝုဏ်အတွင်းတွင်တွေ့ရသည်။ တစ်ချက်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်းအတာအတွက်ကလေး၏အသက်သည်မြင့်ရမည် တက်ဘလက်ကိုလွယ်ကူစွာကိုင်တွယ်နိုင်ရမည် အဖြစ်ကောင်းစွာသင်ပြီးသားရှိရမည်ဟူသောအချက်ကို အချို့သောစွမ်းရည် သိမြင်မှု.
မျက်နှာသာအတွက်ဖြစ်ပါတယ် လျှောက်လွှာအခမဲ့ဖြစ်သည် ပြီးတော့သင့်မှာစတင်ရန်ဥပမာများနှင့်လမ်းညွှန်များအဖြစ်အသုံးချနိုင်သောအကြံဥာဏ်အနည်းငယ်ရှိသည်။
ဒီနေရာမှာ၊ နာမည်တွေ၊ အမှတ်တံဆိပ်တွေမပေးဘဲ၊ ဒီနေ့စျေးကွက်ထဲမှာအိမ်ရဲ့အသေးငယ်ဆုံးဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့နေရာတွေဟာမတူညီတဲ့ automata တွေနဲ့ကစားလို့ရနိုင်တယ်လို့ပြောပါ။ အမျိုးမျိုးသောကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောလှုပ်ရှားမှုများလုပ်ဆောင်ရန်ပရိုဂရမ်။ ဥပမာတစ်ခုမှာအခန်းတစ်ခန်းရှိရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက် A မှ စတင်၍ စက်ရုပ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်တည်ထောင်ထားသောအမှတ်သို့ရောက်ရှိရန်ဖြစ်နိုင်သည်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါဒီစိတ်ကူးသည်ထိုအချိန်ကငါဒီဒေသမှာစတင်လုပ်ကိုင်ဖို့ရှေးခယျြခဲ့ကွောငျးဝန်ခံရမည်နှင့်, ငယ်ရွယ်စဉ်မှာကလေးများသည်များသောအားဖြင့်အတော်များများနားမလည်သော်လည်းငါတို့ရောက်ရှိနိုင်သည် သူတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ကြုံတွေ့ရသောစိန်ခေါ်မှုများကိုစိတ်ဝင်စားစေပါ ငါတို့ရှိသမျှသည်အချိန်များတွင်သူတို့ကိုကူညီပေးခဲ့သည်။
၎င်းသည်ပိုမိုခေတ်မီသောပရိုဂရမ်များအသုံးပြုရန်တံခါးဖွင့်ပေးခြင်းနှင့်၎င်းတို့အတွက်စိန်ခေါ်မှုများကိုအဓိကထားပြီး၊ ဤခေတ်များ၌ကျွမ်းကျင်သူများအဆိုအရရည်ရွယ်သင့်သည်။ မျိုးစုံအသိဉာဏ်အများအပြားမြှင့်တင်ရန် ထိုကဲ့သို့သောသင်္ချာ, Spatial သို့မဟုတ်ဘာသာဗေဒအဖြစ်
ယခင်အဆင့်၏ထောက်ခံချက်များအပြီးတွင် Jr ၏ဗားရှင်းမှသွားခြင်းထက် ပို၍ ကောင်းသောအရာမရှိပါ ကုတ်ခြစ်ရာအထူးသဖြင့်သင်ကကျွမ်းကျင်လျှင်၊ ကမ္ဘာပေါ်ရှိအဓိကပညာရေးပရိုဂရမ်းမင်းပလက်ဖောင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုယူဆရသောအဆင့်မြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ ဤမူကွဲသည်အသက် ၈ နှစ်အထက်ကလေးများအတွက်ရည်ရွယ်သည် အသက်အနှစ် များသောအားဖြင့်ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသည့်အတိုင်းအရာအားလုံးသည်သူကိုယ်တိုင်နှင့်သူစိတ်ဝင်စားကောင်းပေါ်မူတည်လိမ့်မည်။
သင် Scratch နှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိပါက၎င်းသည်ရောင်စုံအပိုင်းအစများအသုံးပြုခြင်း၏နောက်ကွယ်တွင်ဝှက်ထားသောအဆင့်မြင့်ဘာသာစကားတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျပြောရလျှင်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုထက်ပိုနေသည်ဟုထင်ရပါသည်၊ ၎င်းတို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင်စီမံကိန်းပေါင်း ၁၄ သန်းကျော်ရှိသည် ဒါကလမ်းပြပေးနိုင်ပါတယ်။
Tynker အဘယ်သူ၏အသုံးပြုမှုကိုနိုင်ပါတယ်ပရိုဂရမ်းမင်းဘာသာစကားဖြစ်ပါတယ် ခြစ်ရာနှင့်အလွန်ဆင်တူသည် ကလုပ်ကွက်များ၏နေရာချထားအပေါ်အခြေခံသည်ကတည်းက။ အဓိကအားသာချက်တစ်ခုမှာ freemium ဒphilosophနကိုလိုက်နာခြင်းအပြင်၎င်းသည်၎င်း၏စင်မြင့်ပေါ်တွင်တွေ့ရှိခြင်းဖြစ်သည် မျိုးစုံသင်ခန်းစာများ ကျွန်တော်တို့ကို software နှင့်အတူစတင်ရန်ကူညီပေးသည်။
ယခင်ရွေးချယ်မှုကဲ့သို့ပင်တာဝန်ရှိသူများ Tynker သည် ၈ နှစ်အထက်ကလေးများအတွက်၎င်းကိုအသုံးပြုရန်အကြံပြုသည်, ကလေးများပလက်ဖောင်းကမ်းလှမ်းမှုများမှအမှန်တကယ်အကျိုးအရှိဆုံးရှိသည်ဟုသူတို့ယုံကြည်သောအသက်အရွယ်၊ အဆင့်များစွာနှင့်ပြည့်မီရန်ရည်ရွယ်ချက်များအမျိုးမျိုးရှိသည်။
အသက် ၁၀ နှစ်မှ ၁၂ နှစ်အကြားရှိ
ဤအချက်မှာအမှန်တရားမှာကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးငယ်များသည်ယခင်ကကဲ့သို့မဟုတ်တော့ဘဲသူတို့၏စွမ်းရည်သည်အချိန်နှင့်အမျှတိုးတက်လာခဲ့သည်။ ဒီနေရာမှာသူတို့ကိုလှုံ့ဆော်မှုကိုရပ်တန့်ပစ်ရမယ် သင်၏ကိုယ်ပိုင်ပန်းတိုင်များနှင့်၎င်းတို့မည်သို့အောင်မြင်ရမည်ကိုဆုံးဖြတ်ပါ.
ဒီဟာကကျွန်တော့်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာထက်ပိုပြီးထူးခြားတဲ့ဆော့ဝဲလ်ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကလုပ်ကွက်တွေနဲ့ပရိုဂရမ်မလုပ်ရသေးပေမယ့်အမှန်တရားကတော့ပရိုဂရမ်ပရိုဂရမ်မာပတ် ၀ န်းကျင်ကိုအသုံးပြုဖို့အထူးသဖြင့်သူ့ရဲ့အင်တာဖေ့စ်ကိုအသုံးပြုဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့အလယ်အလတ်အဆင့်ဖြစ်နိုင်တယ်။
Code Monkey ထဲမှာငါတို့ရပါလိမ့်မယ် ကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများမှတစ်ဆင့်ငှက်ပျောသီးကိုစုဆောင်းရမည့်မျောက်တစ်ကောင်၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုထိန်းချုပ်ပါ။ မျောက်ကိုရွှေ့ဖို့စိတ်ကူးထားသလိုသေချာအောင်လုပ်ရမယ်၊ ရိုးရှင်းတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေသုံးပြီးကုဒ်ကိုရေးရမယ်။ နောက်အဆင့်သို့ရောက်သောအခါအခက်အခဲပိုများလာသည်။
ဒီအချိန်မှာငါတို့သားသမီးတွေရဲ့ဘဝအသက်တာမှာငါတို့ရှိနေပြီ 'ခက်ခဲ' ပရိုဂရမ်ကျွမ်းကျင်မှုပေါ် မူတည်၍ ဖြစ်နိုင်ခြေများမှာများပြားလှပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကွဲပြားသောနည်းစနစ်များကိုတင်ပြသောပလက်ဖောင်းအချို့ရှိသော်လည်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောပရိုဂရမ်းမင်းနည်းစနစ်များကိုသင်ယူရန်အရှိန်မြှင့်သင်တန်းများရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
AppInventor ပါ Android application များကို ဖန်တီး၍ code block များကိုဆွဲယူခြင်းဖြင့် application တစ်ခုသာဖြစ်သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက၊ Google ကိုယ်နှိုက်ကတီထွင်ခဲ့သည် နှင့်၎င်း၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ထက်နည်းနည်းမျှအားဖြင့်ဘွားမြင်သည် MIT က.
AppInventor ရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးအချက်ကအဲဒါပါ လုံးဝအခမဲ့ အသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူသည်၊ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့စတင်ခြင်းကိုစတင်ရန်အင်တာနက်တွင်သင်ခန်းစာအမြောက်အမြားရှိသည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါက
ဟုတ်တယ်၊ မှန်မှန်ကန်ကန်ဖတ်တယ်၊ ဒီအသက်အရွယ်မှာစသုံးတာဟာပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် Python ကိုအထူးသဖြင့်ငါတို့အိမ်ရှိလူငယ်တစ် ဦး သည်လုပ်ကွက်များနှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်နှင့်သူ၏စိုးရိမ်မှုများကြောင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပရိုဂရမ်းမင်းသို့ဝင်ရောက်လိုလျှင်ဖြစ်သည်။
မင်းတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲ၊ သူတို့ဟာဆိုလိုတဲ့အရာအားလုံးနဲ့ပရိုဂရမ်းမင်းဘာသာစကားကိုရင်ဆိုင်နေကြရတယ်။ အများကြီးရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကထည့်သွင်းခဲ့ကြသည် Python ကိုစာသားပရိုဂရမ်းမင်းနှင့်မိတ်ဆက်ရန်အကြံပြုသောကျွမ်းကျင်သူများ ၎င်း၏ရိုးရှင်းသည်။ တစ်ဖန်သုတေသနအနည်းငယ်လုပ်ခြင်းဖြင့်၊ အသက် ၁၄ နှစ်မှ စတင်၍ မည်သို့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရိုးရာစာအုပ်များကဲ့သို့သောအခြားသတင်းအချက်အလက်ရင်းမြစ်များကိုရှာဖွေရန်သင်ခန်းစာများစွာကိုသင်တွေ့ရှိနိုင်လိမ့်မည်။
ဒီနေရာမှာ၊ ပြီးခဲ့တဲ့နေရာမှာတောင်မှ၊ ငါတို့ဟာပြီးပြည့်စုံတဲ့လူငယ်များအပြင်ဒီကမ္ဘာထဲ ၀ င်ချင်တဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအကြောင်းပြောနေပြီးပါပြီ။
ဤခေတ်များ၌လူငယ်များသည်သူတို့၏အနာဂတ်ကိုစတင်စီစဉ်ရန်မှာပုံမှန်ဖြစ်သည်။ ဖြစ်နိုင်ခြေများစွာနှင့်ဆင်ခြင်တုံတရားကဲ့သို့ပင်စာသားပရိုဂရမ်းမင်းဘာသာစကားများနှင့်စတင်လုပ်ကိုင်ခြင်း မှစတင်၍ လောင်ကျွမ်းခြင်းအဆင့်များကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် Java, Objective-C ... သို့ရောက်ရှိခြင်းသို့မဟုတ်အရာဝတ္ထုကို ဦး တည်သည့်ဘာသာစကားများသို့သင်သွားလိုပါကသို့မဟုတ် ထို့အပြင် C. ၏အစွမ်းထက်နှင့်စွယ်စုံကမ္ဘာကြီးသို့ဝင်ပါ။
ပရိုဂရမ်းမင်းကိုအီလက်ထရွန်းနစ်နှင့်ရောနှောမည့်ကိုယ်ပိုင်စီမံကိန်းများကဲ့သို့သော ပို၍ လေးနက်သောအရာများပြုလုပ်ရန်အချိန်ကောင်းဖြစ်ကြောင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကျွန်ုပ်ယုံကြည်သော်လည်းဤအဆင့်တွင်အဆိုပြုချက်များစွာကိုတင်ပြလိုပါသည်။
၏စစ်မှန်သောအလားအလာ Arduino သူတို့ရဲ့ကြီးမားတဲ့တည်ရှိသည် စိတ်ကြိုက်, ဘက်စုံသုံးနှင့်အရွယ်မှာ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဖြစ်နိုင်ခြေ။ ၎င်းကိုမျက်နှာသာပေးသည့်နောက်အချက်တစ်ခုမှာယနေ့စီမံကိန်းနောက်ကွယ်တွင်ကြီးမားသောရပ်ရွာတစ်ခုရှိသည်။ ထိုနေရာတွင်သင်သည်အမှန်တကယ်စီမံကိန်းများပေါ်တွင်လုပ်ကိုင်ရန်သင်ယူရန်သင်လှည့်နိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်ဗွီဒီယိုဂိမ်းကိုနှစ်သက်သူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးသင်၏ဘဝအသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းလုပ်ငန်းကိုဤနည်းဖြင့်တိုးတက်လိုပါကသင်ကြိုးစားရန်စိတ်ဝင်စားပေမည် Stencylအခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲ (အခကြေးငွေဖြင့်ရသောဗားရှင်းရှိသည်) ၏ယခုအချိန်တွင်ပိုမိုအဆင့်မြင့်သောဗီဒီယိုဂိမ်းများကိုဖန်တီးရန်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည် သင့်အားကြီးမားသောအလားအလာရှိသောအဆင့်မြင့်။ ကိုယ်ပိုင်ဂိမ်းများကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ » ယေဘုယျ » ငါ့ကလေးတွေကိုသင်ပေးဖို့ပရိုဂရမ်းမင်းဘာသာစကားဘာ